PERIKOPA FJKM ALAHADY 04 SEPTAMBRA 2016 | FJKM Amboniloha
Alahady XV manaraka Trinite
1 Tantara 16,8-14 / Lioka 8,43-48 / Asan’ny Apostoly 12,11-17
1 Tantara 16,8-14
8 Miderà an’i Jehovah, miantsoa ny anarany; Ampahafantaro ny firenena ny asany.
10 Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina; Aoka hifaly ny fon’izay mitady an’i Jehovah.
11 Mitadiava an’i Jehovah sy ny heriny, Katsaho mandrakariva ny tavany.
12 Mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsaran’ny vavany,
13 Hianareo taranak’Isiraely mpanompony, Hianareo olom-boafidiny, taranak’i Jakoba.
43 Ary nisy vehivavy anankiray narary* roa ambin’ny folo taona, izay efa nandany ny fananany rehetra tamin’ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nahasitrana azy akory.[*Gr. narary nandeha rà]
44 Dia nankao ivohon’i Jesosy ravehivavy ka nanendry ny somotraviavin-dambany, ary niaraka tamin’izay dia nijanona ny aretiny*.[*Gr. fandehanan’ny ràny]
47 Ary rehefa hitan-dravehivavy fa tsy takona Azy izy, dia nangovitra izy ka nankeo aminy sady niankohoka teo anatrehany, dia nanambara teo anatrehan’ny vahoaka rehetra izay anton’ny nanendreny Azy sy izay nahasitranany niaraka tamin’izay.
Asan’ny Apostoly 12,11-17
11 Ary rehefa nahatsiaro fanahy Petera, dia nanao hoe: Ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin’ny tànan’i Heroda sy ny fanantenan’ny Jiosy rehetra.
12 Ary rehefa fantany tsara izany, dia nankany an-tranon’i Maria, renin’i Jaona, izay atao hoe koa Marka, izy; ary nisy olona maro niangona nivavaka tao.
14 Ary rehefa nahalala ny feon’i Petera izy, dia tsy namoha ny vavahady noho ny hafaliany, fa lasa nihazakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijanona eo am-bavahady.
17 Fa izy nanofa tanana azy mba hangina, dia nanambara taminy izay namoahan’ny Tompo azy avy tao an-tranomaizina. Ary dia hoy izy: Ambarao amin’i Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany. Dia niala izy ka lasa nankany amin’ny fitoerana hafa.
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 29 août 2016